Pop Channel, Author at Pop Channel - Page 204 of 206
ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ အပြုံးပိုင်ရှင် Idol ၁၀ ယောက်
အပြုံးဆိုတာ လူအားလုံးအတွက်အားဆေးတစ်ခုလိုပါပဲ။ ရယ်မောခြင်းဟာ အသက်ပိုရှည်စေတဲ့ဆိုတဲ့ စကားတောင်ရှိပါတယ်။ ယခုဖော်ပြပေးမှာကတော့ ပရိသတ်တွေကိုပါ လိုက်ပြုံးမိစေမယ့် Idol ၁၀ ယောက်ရဲ့ Smile ပုံလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ 1. Tiffany (Girls’…
Lisa ကို Bang မပါဘဲမြင်တွေ့ရမယ့် ဓာတ်ပုံ ၁၀ ပုံ
Blink တွေရဲ့အသည်းစွဲအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Lisa ဟာသူ့ရဲ့နဖူးကို Bang လေးနဲ့အမြဲဖုံးအုပ်ထားပါတယ်။ Lisa ရဲ့ Bang ဟာ စင်ပေါ်မှာဖျော်ဖြေနေတဲ့အချိန်မှာတောင် အနေအထားပျက်ယွင်းမှုမရှိတာကို အားလုံးတွေ့မြင်ပြီးသားပါ။ ယခုဖော်ပြပေးမယ့် ဓာတ်ပုံတွေကတော့ Lisa…
Selfie photos တွေရဲ့နောက်ကွယ်က လျှို့ဝှက်ချက်ကိုပြောပြလိုက်တဲ့ Jennie
Jennie ရဲ့ visual ဟာ အပစ်ပြောစရာမရှိအောင်ကိုပြည့်စုံလှပါတယ်။ သူမရဲ့ ပါးဖောင်းဖောင်းလေးတွေကလည်း blink တို့ရဲ့ အသည်းစွဲပဲဖြစ်ပါတယ်။ Instagram မှာ Jennie တင်ခဲ့တဲ့ selfie photosတွေအရ…
ပရိသတ်တွေ မဲပေးရွေးချယ်ခဲ့ကြတဲ့ အလှဆုံးအမျိုးသမီးသရုပ်ဆောင်များ
ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ လူသိများတဲ့ Voting Website တစ်ခုဖြစ်တဲ့ KingChoice ဟာမကြာသေးခင်က the most beautiful Korean Actress of all time စာရင်းတစ်ခုကိုကြေညာပေးခဲ့ပါတယ်။…
2010 မှ 2020 ခုနှစ်အတွင်း kpop boys group တွေရဲ့ ရောင်းအားအမြင့်ဆုံး album 15 ခု
Kpop album တွေရဲ့ရောင်းအားက အခုနောက်ပိုင်းမှာ တအားကိုပဲ မြင့်တက်လာတာပါ။ Kpop music ဟာ Korea မှာသာမကာ အခုဆိုရင် worldwide အထိ ပါအောင်မြင်လာနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ လူငယ်တွေကြားမှာဆိုရင်လည်း…
Korean Reporters တွေရွေးချယ်ပေးလိုက်တဲ့ အချောဆုံး Female K-Pop Idol ၅ ယောက်
သတင်းထောက်တွေဆိုတာ Idols တွေနဲ့လုပ်ငန်းသဘောအရ မကြာခဏထိတွေ့ဆက်ဆံနေရတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသတင်းထောက်တွေထဲက သတင်းထောက် ၅ ဦးကိုသူတို့အမြဲတမ်းတွေ့နေရတဲ့ female idol တွေထဲက သူတို့စိတ်ထဲမှာအချောဆုံးလို့ထင်ရတဲ့ ၅ ယောက်ကိုရွေးချယ်ခိုင်းခဲ့ရာမှာတော့…. 1. Reporter…
ပန်းချီဆွဲတဲ့နေရာမှာလည်း တော်ကြတဲ့ K-Pop Idol ၁၀ ယောက်
K-Pop Idols တွေဟာ Music နဲ့ပတ်သက်တာတွေအပြင် တစ်ခြားအနုပညာရပ်တွေမှာလည်း ပါရမီရှိကြတဲ့သူတွေပါ။ ဒီလိုတော်ကြတဲ့ Idols တွေထဲက ပန်းချီဆွဲတဲ့နေရာမှာ ပါရမီရှိကြတဲ့ Idols ၁၀ ယောက်ကို Pop…
ငယ်စဉ်အချိန်ကပုံရိပ်လေးတွေကို Instagram ပေါ်တင်ပေးခဲ့တဲ့ HyunA
HyunA ဟာ K-Pop လောကထဲမှာ queen of sexy လို့တင်စားရလောက်သူတစ်ဦးဖြစ်နေပါပြီ။ သူမရဲ့ ထီမထင်တဲ့ပုံစံနဲ့ အလန်းစားကကွက်တွေကြောင့် ပရိသတ်တွေအခိုင်အမာရရှိထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် HyunA ဟာအရင်တစ်ချိန်ကတော့ ချစ်စရာကောင်းပြီး…
IG ပေါ်မှာ Follower အများဆုံး ကိုရီးယားမင်းသားချော ၅ ယောက်
2020 april လအတွင်းမှာ Instagram ပေါ်မှာ follower အများဆုံး ကိုရီးယားမင်းသား ၅ ယောက်စာရင်းကို Pop Channel ရဲ့ပရိသတ်တွေအတွက် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ 5. Ji…
Blink တို့ရဲ့ သည်းသည်းလှုပ်အချစ်တော် Lisa ရဲ့ ဘဝဇာတ်ကြောင်း အပိုင်း (၂)
၂၀၁၀ ခုနှစ်မှာ Lisa သည်ထိုင်းနိုင်ငံသို့ လာရောက်ပြုလုပ်ခဲ့သည့် YG Entertainment ရဲ့ audition တစ်ခုမှာဝင်‌ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ယှဉ်ပြိုင်သူအယောက် ၄၀၀၀ အနက် သူမတစ်ဦးတည်းသာ‌အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်…